Imali ayingasetshenziswa ematshwaleni - Imeya ixwayisa abe-EPWP | News24
Imali ayingasetshenziswa ematshwaleni - Imeya ixwayisa abe-EPWP
eThekwini - IMeya yaseZululand uThulasizwe Buthelezi idonse ngendlebe abaqashwe ngaphansi kohlelo lwe-Expanded Public Works Progarmme (EPWP) ngokusebenzisa ngendlela imali abazoyihola.
UButhelezi uthe: "Ngifisa ikakhulukazi abantu besifazane bayisebenzise ngendlela imali, ingapheleli ematshwaleni kodwa isetshenziselwe ukuxosha ikati eziko."
Lolu hlelo olungaphansi koMnyango wezaManzi nokuThuthwa kweNdle lwethulwe oLundi, eNdonsa Art &Sport Center, yiMeya yase Zululand District uThulasizwe Buthelezi.
Umcimbi ungakaqali kuke kwaba khona iqeqebane labantu abangaphansi kwabayishumi abebekhala ngokuthi ayilandelwanga imigudu efanele.
Babalelwa ku-240 abantu abazoqashwa ngaphahansi kwalolu hlelo futhi bonke abazoqashwa bazothathwa kubo bonke omasipala abangaphansi kweZululand.
Kuzokwenziwa imisebenzi eyahlukahlukene ngaphansi kwalolu hlelo, okubalwa nokuhlanzwa kwamapayipipi nezitamkoko.
OLUNYE UDABA: UMasipala weTheku uyaphenya ngolukakhaphethi wezindodla kuMkhosi woMhlanga
Ngesikhathi yethula inkulumo yayo, le Meya itshele amalungu omphakathi ukuthi benze ubulungiswa ngesikhathi beqasha abantu abazosebenza ngaphansi kwalolu hlelo.
Ithe KwaNongoma kuthathwe abantu abangu-60, oPhongolo bangu-50 oLundi nakhona bangu-50 kanti eDumbe naseBaqulusini bathathe abantu abangu-40.
UThulile Mnyandu, 29, waKwaNongoma uthe ujabule kakhulu ngokuba yingxenye yalolu hlelo ngoba lokhu abazokuthola kuzobasiza bakwazi ukubeka ukudla etafuleni njengoba kunzima ukuthola amathuba emisebenzi ezindaweni zangasemakubo.
"Impilo inzima kithi esingasebenzi ngoba kwesinye isikhathi besivele silale ngophuthu namanzi. Nginethemba lokuthi isimo sizoshintsha ngalolu hlelo, sengizokwazi ukwenza umehluko emndenini wakithi nezingane zami sezizokwazi ukuthi zifane nezinye esikoleni” kusho uMnyandu.